merolagani - कस्तो छ नेपालमा एक महिना भित्र सार्वजनिक हुने रोयल इन्फिल्ड मेटोर ३५० ?
कस्तो छ नेपालमा एक महिना भित्र सार्वजनिक हुने रोयल इन्फिल्ड मेटोर ३५० ?
Apr 17, 2021 02:13 PM Merolagani
नेपाली दुईपाँग्रे सवारी बजारमा लोकप्रिय मोटरसाइकलको नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने भएको छ । लामो दुरी तथा क्लासिक लुक्सले नेपाली युवाहरुमा परिचित रोयल इन्फिल्ड (बुलेट) मेटोर ३५० नेपाली बजारमा भित्रिने भएको हो ।
रोयल इन्फिल्ड बाइक मात्र होइन, ‘स्टाइल’ हो, ‘ब्रान्ड’ हो जसले नेपाली बजारमा पनि आफ्नो राम्रै छाप छाडेको छ ।
रोयल इन्फिल्ड लामो दूरीको यात्रा तय गर्न उपयुक्त समेत मानिन्छ । यसै क्रममा रोयल इन्फिल्डको आधिकारीक वितरक विवेक अटोमोवाइलले नेपाली बजारमा मेटोर ३५० सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेकाे हो ।
मेटोर ३५० ले ‘इन्डियन मोटरसाइकल अफ दि इयर’, सिएनवीसी अवार्ड, इन्डियन मोविलिटी अवार्ड, अटोकार अवार्ड जस्ता प्रतिष्ठित अवार्ड पनि हासिल गरेको थियो ।
कस्तो छ मेटोर ३५० बुलेट ?
रोयल इन्फिल्ड मेटोर ३५० मा ३४९ सीसी सिंगल सिलिन्डर एयर कुल्ड बीएस ६ इन्जिन रहेको छ जुन इन्जिनले २०.२ बीएच पावर तथा २७ एनएम टर्क जेनेरेट गर्दछ । सो बाइक बीएस६ मापदण्डको इन्जिनमा आधारित रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
यसमा ५ स्पीडको गियरबक्स जडान गरिएको यो बाइकमा तीन वेरिएटमा उपलब्ध रहने छ । जुन फायरबल, स्टेलर र सुपरनोभा रहेका छन् ।
२७० एमएम रियर डिस्क ब्रेक र ३०० एमएम फ्रन्ट डिस्क ब्रेक दिइएको छ भने बोसको अत्याधुनिक एबीएस सिस्टम पनि जडान गरिएको छ । सो बाइकको कुल वजन १९१ किलोग्राम रहेको छ भने यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १७० एमएम रहेको छ ।
रोयल इन्फिल्डले रेट्रो इन्स्पायर डिजाइनमा निर्मित मेटोर ३५० ले कम्पनीकै थन्र्डरबर्डको झल्को दिन्छ ।
रोयल इन्फिल्डले आफ्ना उत्पादन मेटोर ३५० मा पहिलो पटक कनेक्टेड फिचर प्रयोग गरेको छ जसमा स्मार्ट फोन कनेक्ट गर्न सकिने इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल जडान गरेको छ ।
रोयल इन्फिल्ड मेटोर ३५० मा उत्कृष्ट ह्यान्डलिङ र लाइटवेट प्याकेजका साथ स्टील ट्रेल फ्रेम, मोनोशक, ह्वील, फ्यूल ट्याङक, अफरोड एबीएस जस्ता फिचर रहेका छन ।
कम्पनीले यसमा सेमी डिजिटल डिस्प्लेको प्रयोग गरेको जनाएको छ । सो बाइकमा सबै एलईडी प्याकेजहरु उपलब्ध रहेका छन जसमा एलईडी डीआरएलको साथ पूर्ण एलईडी हेडल्याम्प, एलईडी इन्डिकेटर र पछाडि एलईडी टेल ल्याम्प समाबेश छन ।
रोयल इन्फिल्ड मेटोर ३५० को नेपाली बजारमा ६ लाख हाराहारी पर्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालमा बढिरहेको क्लासिक मोटरसाइकलको सेगमेन्टलाई विस्तार गर्नका लागि रोयल इन्फिल्ड मेटोर ३५० नेपाली बजारमा एक महिना भित्र उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
रोयल इन्फिल्ड मेटोर ३५० ले नेपाली बजारमा होंडा हाइनेस सीबी ३५०, जवा पेराक, बेनेल्ली इम्पीरियाल ४००, होंडा सीबी ३५० आरएस र बजाज डोमिनार ४०० सँग सिधा प्रतिस्पर्धा गर्ने छ ।